İzmir’de 170 noktada ‘Önce Yaya’ Uyarısı – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 Izmir'Digniinta lugta hore' ee barta 170 ee Izmir
25 / 07 / 2019 35 Izmir, Turkish Aegean, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
digniinta dadka lugaynaya ee bartii izmir
Dawlada Hoose ee Magaalada polzmir waxay bilawday inay calaamadiso dhulka iyada oo la eegayo ololaha Wasaaradda Arimaha Gudaha 'Ahmiyadaha nolosha, mudnaanta ololaha'. 170 dhibco gaar ah, iskuullada iyo isgoysyada lugeynaya ayaa bilaabay in lagu dabaqo muuqaalka 'Lug lug gooye ah' sawirka, wuxuu ku fidi doonaa guud ahaan Izmir kadib degmooyinka dhexe.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha waxay ku dhawaaqday 2019 sanadka Y እግin ee Mudnaanta Gaadiidka '. Dalka oo dhan 'Mudnaanta Nolosha, Ololaha mudnaanta ee lugeeyaha' ayaa lagu bilaabay hal-ku-dhigga ku saabsan calaamadaynta dhulka waxaa lagu sameyn doonaa Izmir marka loo eego 170. Diyaar u ah in lagu soo jiito mudnaanta dadka lugeynaya ee taraafikada 'lugeeyaha hore' sawirrada waxaa lagu sawirayaa isgoysyada lugeynaya iyo isgoysyada iskuulka si darawaladu u arki karaan. Markaa, darawalada ayaa looga digayaa calaamadaha dhulka / dhulka inay yareeyaan oo ay siiyaan dadka lugaynaya xuquuqda inay dhaafaan. Waaxda Isutagga Gaadiidka Gaadiidka Gaadiidka ee Waaxda Izmir ee Waaxda Gaadiidka Gaadiidka ayaa bilaabay daraasadda, bartamaha magaalada ayaa markaa ku fidaysa degmada 30.
Xuquuqda lugeeyaha hore
2918, Qodobka 74 ee Sharciga Wadada Wadada No. 26 Oktoobar 2018 wuxuu sameeyay isbadal la taaban karo ee taariikhda. Sida ku xusan qawaaniinta cusub, darawalada waa iney yareeyaan marka ay u dhawaanayaan lugeeyaha ama isgoysyada iskuulka ee laga soo galo isgoysyada iyo meelaha laga baxo ee lagu calaamadeeyay calaamadaha taraafikada ama calaamadaha aan laheyn qof idman ama calaamadaha taraafikada, oo ay joojiyaan dadka lugeynaya inay maraan ama, haddii ay jiraan, siinaya kaarka koowaad.
Digniinta koowaad ee muuqaalka waxaa laga sameeyay Halit Ziya Boulevard
Iyada oo wax laga beddelay sharciga, ayaa olole la bilaabay in lagu calaamadiyo waddooyinka dalka oo dhan si loogu hirgeliyo iskuullada ama isgoysyada lugeynaya jidadka muhiimka ah iyo mudnaanta magaalada halkaas oo xaddida xawaarehu ka yar yahay 30 km / h oo aan lahayn nidaam tilmaam. Dawlada Hoose ee Magaalada polzmir waxay isticmaashay Muuqaalkii ugu horreeyay ee 'lugeeyaha hore' ee Halit Ziya Boulevard macnaha guud. Karataş, Buca iyo Laanta Adeegyada taraafikada ee Waaxda Gaadiidka waxay sii wadaan inay calaamadiyaan dhulka, dalabka waxaa lagu fulin doonaa meelo kala duwan oo magaalada 170 ah.
Yaraynta shilalka shilalka ayaa bilaabmay
Marka loo eego xogta Wasaaradda Arimaha Gudaha, ahmiyad siinta nolosha ee kampanya, mudnaanta ololaha lugaynta waxaa lagu bilaabay halku dhiggii lixda bilood ee ugu horreeyay waddanka oo dhan; Boqolkiiba 12,3 ee shilalka wadarta ah ee dhimashada iyo dhaawaca, boqolkiiba 31,3 ee shilalka dilaaga ah, boqolkiiba 12 ee dhaawacyada, boqolkiiba 35,2 ee dhaawacyada iyo boqolkiiba 13,1 ee dhaawacyada ayaa la yareeyay.
WISCO waxay soo saartaa jidka xadiidka xadiidka 170.000 mt ee bilaha 1aad-9aad
Wadooyinka Elazığda 6 Dhinaca kala duwan
Sawirada ugu horeysa ee lugta
Ahmiyadaha dadka lugaynaya